ONN LIVE:Marii Araaraa ABO fi Mootummaa Itiyoophiyaa Gidduutti Abbootin Gadaa Oromoo Qopheessan - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosONN LIVE:Marii Araaraa ABO fi Mootummaa Itiyoophiyaa Gidduutti Abbootin Gadaa Oromoo Qopheessan
Eebba Gadaa Oromoo booranaa
Konsartii hadhaa qabsoo Ilfinesh qannoo irraatti
Alaabaa biyyaa kiyyaa
Hinjigiduu hinkuftuu yomu atiii..
Maal Ibsa kuni?
Artist Umar suleeyman Hawwisoo WBO ta uu fedhee laata!
akkuma beekamu guyyaa har’aa jechuun Amajjii 21/01/2019 A.L.A tti dhimma rakkoo mootummaa fi ABO gidduu jiru furuuf yaa’iin abbootii gadaa har’a akka eegalamu beekamaadha.
Baga abbaa gadaa qabanne kan uummatni oromoo ittiin rakkoo isaa furatu jenna.
Gurra qarree maal akka isaan murteessan eegaa jirra.
Wantootni furmaata Atattamaa barbaachisan….
1, Rakkoo wal dhabdee qaamota lamaan gidduutti uumaman hundee irraa furuuf yaaluu…
2, Gama mootummaanis ta’e gama ABO tiin abbaan badii qabu ceephoo buufachuu fi uummata dhiifama gaafachuu danda’uutu jiraata.
3, sababii rakkoo nageenyaa iddoo garaa garaatti uumameen namoota maatiin isaanii lubbuun jalaa du’aniif akka gadaa oromootti sirna gumaa baasuu raawwachuu…
3, Namoota qe’eef qabeenyaan isaanii bifa kamiinuu miidhameef beenyaa murteessuu….
Haala ittiin deebifamanii dhaabaman irratti haala aanjessuu danda’uu…
4, Dhimma waraanaa irratti gama lammanitti utuu hin loogin tokko hiikkachiisanii, gariin hidhachiisuu utuu hin taane waraanni bilisummaa oromoo waraana ilmaanni oromoo qulqulluun itti wareegamaa fi kitimamaa as ga’aniidha waan ta’eef dhaaba kamiif osoo hin taane OROMIYAA dhaaf ni barbaachisu waan ta’eef dhimma egeree oromiyaa ilaalcha keessa galchamee itti yaadamuu qaba.
Dhimmi duula holola wal irratti oofuu furmaata waara’aan argamuufii qaba.
5, mootummaan uummata nagaa irratti ol fuudhee xiyyaaraan rukutuu isaatiif dhiifama gaafachuu qaba.
6,Namootni dhimma wal dhabdee mootummaa fi dhaaba ABO gidduuttu hidhaman haal duree tokko malee gadi lakkifamuu qabu.
Akka Abbaa gadaatti…
Tokko xiqqeessanii, tokko guddisuun yakka waaqaaf lafaati….
Warra murtoo haqaa murteessu issin haa godhu
Burqaan yaada keessanii furmaata saba bal’aaf haa taatu…
#Dhaamsa kana dafaa share godhaa ittiin nuuf qaqqabsiisaa…..
Gadaan quufaa gabbina